Tokyo MX – Networks – MMANIME
Walkure Romanze Hellen's hill ဆိုတဲ့မြို့ကလေးမှာရှိတဲ့ Winford acedamy ဆိုတဲ့ကျောင်းလေးဟာ ကျောင်းသားတွေကို Knight လေးတေဖြစ်အောင်သင်ကြားပေးပြီး jousting (မြင်းစီးရင်းလှံဖြင့်တိုက်ခိုက်ရသောအားကစားတမျိုး) ကိုကျွမ်းကျင်အောင်ကြုလုပ်ပေးတဲ့ကျောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ဒီကားရဲ့ MC လေးဖြစ်တဲ့ Takahiro Mizuno လေးဟာ အဲ့ကျောင်းမှာသင်ကြားဖူးပေမဲ့ သူဟာဒဏ်ရာရပြီးနောက် အဲ့သင်တန်းကျောင်းကထွက်လိုက်ပြီး သူဟာ begleiter(တွဲဖက်)အဖြစ်သာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူရဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ထိန်းကျောင်းနိုင် ပြီး jousting မှာ လည်း နှစ်ယောက်မရှိအောင် ကျွမ်းကျင်မူကြောင့် သူဟာ အဲ့ကျောင်းမိန်းကလေးတွေကြားမှာရပန်းစားနေပြီး မိန်းကလေးတိုင်းကသူ့ကို သူတို့ရဲ့begleiter ဖြစ်စေချင်နေပါတယ် ဒါပေမဲ့သူကလက်မခံခဲ့ပါဖူး တနေ့မှာ သူ့သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Mio လေး ရဲ့မတောတဆမူကြောင့်စိန်ခေါ်ခံရတဲ့အခါမှာ ဘာတေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့.... Episode1 Episode2 Episode3 #AMETHYST Present
Moriarty the Patriot မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး မိုရီအားတီ ................................................. ရှားလော့ခ်ပရိသတ်တွေဆိုရင် ဒီဘဲအကြောင်းကိုသိကြမှာပါ။ ရှားလော့ခ်နဲ့သူတင်ကိုယ်တင်ဉာဏ်ရည်ယှဉ်ခဲ့တဲ့အပြင် နောက်ဆုံးရှားလော့ခ်ကိုပါရေတံခွန်ထဲဆွဲချပြီးဇီဝိန်ခြွေပြခဲ့တဲ့ဘဲကြီးပါ။ ရှားလော့ခ်ကိုမသိကြရင်တောင် ရှားလော့ခ်ဇာတ်လမ်း‌တွေကို‌80%မှီငြိမ်းထားတဲ့ မင်းသိင်္ခရဲ့ မြန်မာကျော် ဆားပုလင်းနှင်းမောင်ဝတ္ထုမှာပါတဲ့ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်ကိုသေနတ်နဲ့ပစ်ပြီးလုပ်ကြံခဲ့တဲ့ ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာဆိတ်ဖွားဆိုတာဟာ မိုရီအားတီကိုမှီငြိမ်းထားတဲ့ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် ရှားလော့ခ်ကိုအဓိကဇာတ်ကောင်အနေနဲ့တည်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပဲထွက်လေ့ရှိပေမယ့် ဒီဂျပန်ကာတွန်းမှာတော့ ရှားလော့ခ်ရဲ့ရန်သူတော်ကြီးမိုရီအားတီရဲ့ဉာဏ်ကစားပုံတွေ၊ အစီအစဉ်ဆွဲပုံတွေကိုအဓိကပြထားတာပါ။ လောလောဆယ်တော့ အပိုင်း၁ or pilot episodeပဲထွက်သေးပါတယ်။ သိသလောက်တနင်္ဂနွေတိုင်းထွက်တာလိုပဲဗျ အပိုင်း၁ကတော့ Myanimelistမှာ 7.4/10 Original Name – 憂国のモリアーティ Status – Returning Series Network – Tokyo MX Aired – 2020-10-11 Genres___Animation, Mystery File size__( 109MB-293 MB) Quality__1080p Format__mp4 Duration__24mins per EP Subtitle__Burmese Translated by DrNyan Encoded by Shine Bo Bo Latt Episode (1) [109 MB] Mediafire / DatBu / Usersdrive / Yandex ...
TMDb: 7.4/10 votes
Yuuna and the Haunted Hot Springs Fuyuzora Kogarashiဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက တစ္ဆေသရဲတွေကို တွေ့မြင်နိုင်တဲ့ထူးခြားစွမ်းရည်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စရပ်တွေကြောင့်ပဲ သူ့အနေနဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြုံတွေ့နေရတာကြာခဲ့ပါပြီး။တစ်နေ့မှာတော့ အထက်တန်းကျောင်းသားဖြစ်တဲ့သူက သရဲခြောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ Yuragiအိမ်ယာကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ရာ အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ်။သူ့လိုမျိုး အိမ်ပိုင်မရှိတဲ့၊ဆင်းရဲတဲ့သူတစ်ယောက်အတွက် ဒီလိုသရဲခြောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ Yuragiအိမ်ယာက ဈေးသက်သာလွန်းတဲ့နေစရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ သရဲမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းကိုအယုံအကြည်ရှိပြီး ဇွတ်နှစ်လိုက်ကာမှ ခြောက်တဲ့သရဲက Yuunaဆိုတဲ့ အသက် (၁၆) နှစ်အရွယ် ချစ်စရာသရဲမလေးဖြစ်နေပါတယ်။ တလွဲအခန်းဖော်တွေကလည်း အလွှာစုံကမို့ အခွီးဖြစ်လာမှာသေချာပါတယ်။အဆိုပါ သရဲမလေးကျွတ်လွတ်မှသာ သူ့အနေနဲ့အဆိုပါအိမ်ယာမှာငှါးရမ်းခပေးစရာမလိုပဲ နေခွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အဆိုပါ သရဲမလေးကျွတ်လွတ်ဖို့ရာ သူမရဲ့မပြီးပြတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကို ပြီးပြတ်အောင်ကူညီပေးရပုံကို Comedyအသားပေးရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Yuragi-sou no Yunna-san Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 Episode 12 OVA 1 OVA2OVA 3
Teasing Master Takagi-san Season2အချစ်ဆိုတဲ့ အရာဟာဆန်းကျယ်လှပါတယ် Takagi ဆိုတဲ့ဘက်စံု‌ေတာ်တဲ့ကောင်မ‌ေလးဟာ Nishikata ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကြိုက်နေပါတယ် ထိုကောင်လေးဟာ သူ့ကို စလိုက်ရင် အလွန်ရှက်သွားတာကြောင့် Takagi ဟာသူ့ကို တွေ့ရင် မစရမနေနိုင်ပါဘူး Nishikataကလည်း သူအစခံရပေါင်းများလာတော့ သူမကို ပြန်စမယ်ဆိုပြိး ကြံတိုင်း အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထားတဲ့ romance animeလေးဖြစ်ပါတယ် Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 Episode 12
TMDb: 8.2/10 167 votes
Love and Lies ခေတ်ဆန်သော လူမှု အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သောဂျပန်တွင် ကံတရားရဲ့ ကြိုးမျှင်နီဟူသောအစီအစဉ်နှင့်မွေးဖွားနှုန်းလျော့ကျလာသော ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနေပါတယ် အသက်ဆယ့်ခြောက်နှစ်အရွယ်မှစပြီး အစိုးရက ကိုယ်နှင့် မဂ်လာ‌ေ‌ဆာင်မည့် လက်တွဲဖော်ကို ရွေးချယ်‌ေပးပါတယ် Yukari Nejima အတွက်ကတော့ သူ့မှာ ငယ်ငယ်ထဲက ချစ်နေခဲ့ရတဲ့ Misaki Takasaki ရှိပါတယ် Yukariဟာ ထို စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး Misakiကကိုဖွင့်ပြောလိုက်ပါတယ် Misaki ဟာလည်း Yukariကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ် ကံဆိုးစွာနဲ့ ပဲ သူတို့နှစ်ယောက်၏ဆက်ဆံရေးကို ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ခင်မှာပဲ Yukari ကသူ၏လက်ထပ်ရန် သတိပေးစာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်သူ၏လက်ထပ်ရန် ပါတနာ Ririna Sanadaတို့ သူတို့နှစ်ဦးကြား ၀င်ရှုပ်‌လာတော့တဲ့အခါမှာတော့.... Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode 5
High Score Girl II "High Score Girl"စီးရီးဟာ "Oshikiri Rensuke"ရေးသားတဲ့ မန်ဂကနေ အာနီမဲအဖြစ် ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး မန်ဂဇာတ်သိမ်း အတွဲ ၁၀အထိဟာ အာနီမဲအပိုင်း ၂၄ပိုင်းထဲ အပြည့်အစုံပါဝင်ပါတယ်။ Netflix Original Serieအဖြစ်နဲ့ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး အထိုက်အလျောက် အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ စီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ "ရဂုချီ ဟာရူအို"ဆိုတဲ့ ၆တန်းနှစ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ ကျောင်းစာပညာရပ်ပိုင်းမှာ အရမ်းကို ညံ့တဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သာမန်ကျောင်းသားတွေထဲက မထင်မရှားတစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ဆီမှာ ထူးချွန်တဲ့အပိုင်းလေးတော့ ရှိတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ဂိမ်းကစားတဲ့ စွမ်းရည်ပါပဲ။ တစ်နေ့ သူဂိမ်းကစားရင်း ပွဲဆက်တိုက်နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ မိန်းကလေးကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့ အနိုင်ပိုင်းခြင်းကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာ တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူနဲ့တစ်ကျောင်းတည်း တစ်တန်းတည်းအတူတူတက်နေတဲ့ နန်းထိုက်တော်ဝင်ပန်းလို့ ညွှန်းဆိုခံရတဲ့သူ၊ မိသားစုက ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့အပြင် စာပေ၊ အနုပညာ၊ ရုပ်ရည်ရူပကာ ဘာဆိုဘာမှ အပြစ်ပြောစရာ ရှာမတွေ့နိုင်လောက်တဲ့ "အိုနို အာကီရ"ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးပါပဲ။ ...
TMDb: 8.2/10 76 votes
Blood Blockade Battlefront Kekkai Sensen Review ကမ္ဘာနဲ့ငရဲပြည်ကြားကပိတ်ဆို့ထားမှုတွေဟာ ပေါင်းကူးအနေနဲ့ New York မြို့မှာပွင့်ထွက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်New Yorkမြို့သူမြို့သားတွေရယ် တခြားကမ္ဘာကအကောင်တွေရယ်ဟာ ဖောက်ထွင်းလို့မရတဲ့ဖန်လုံးကြီးတစ်ခုထဲမှာပိတ်မိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့မြို့သူမြို့သားတွေဟာ ဒီလိုရူးကြောင်ကြောင်သတ္တဝါဆိုးကြီးတွေနဲ့အတူတူနှစ်နဲ့ချီပြီးနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမယ့်နောင်ဆုံးမှာတော့ အဲ့ဖန်လုံးကြီးကိုဖောက်ထွင်းဖို့ကြံစည်တဲ့သူပေါ်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမှာပဲတခြားသဘာဝလွန်လူသားတွေဟာလည်း အဲ့ဒီအကြံအစည်မအောင်မြင်ဖို့တားဆီးကြပါတော့တယ်။သူတို့နှစ်ဖက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့... အပတ်စဉ်သောကြာနှင့်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် Mmanime(dot)orgတွင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ပေးကြပါခင်ဗျ Season 1 Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8
The Testament of Sister New Devil Review ဒီ Anime ဟာ 2012 မှာ light novel စတင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး 2015မှာ Anime အဖြစ်စတင်ထွပ်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Toujo Basara ဟာ အထက်ကျောင်းသားဖြစ်ပြီးအဖေဖြစ်သူ Toujo Jin နဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေပေမဲ့ တစ်နေ့မှာ အဖေဖြစ်သူဟာ နိုင်ငံခြားတွင်ရှိသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် နောက်အိမ်ထောင်ပြုမည်ဟုဆိုပြီး ထိအမျိုး၏သမီးနှစ်ဦးဟုဆိုတဲ့ Mio နဲ့ Maria နှင့် ကော်ဖီဆိုင်တွင်မိတ်ဆတ်ရန်တွေ့စုံစဉ်ကတည်းက အိမ်သာ oppai အသင့်အတင့်ရှိသည့် maria နှင့်မတော်တဆဖြစ်ကာ စစတွေ့ချင်းလှလှပပမြင်ကွင်းမျိုးကိုတွေ့ရမှာပါ။ ထို့ပြင် Loli ကလေးဖြစ်သည့် Maria မှာလည်း အရွယ်သေးသော်လည်း Ero ဆန်သောဆွဲ‌ဆောင်မူများရှိပါတယ်။ ညီမနှစ်ယောက်နဲ့အတူနေရင်း Onii-san ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုသဘောကျလာချိန်မှ မိစ္ဆာဘုရင်နဲ့ Succubus ဆိုတာသိလိုက်ရဲ့အပြင် သူ့အဖေရဲ့အိမ်ထောင်ပြုမဲ့ကိစ္စဆိုတာ မှတ်ဉာဏ်လှည့်စားထားမှန်းသိတောင် ဂရုမပျက်ဘဲ ညီမတွေကိုဆက်လက်ဂရုစိုက်တွေပုံကြည့်ရှူရမှာပါ။ ကျောင်းမှာလဲ သူ၏မွေးရပ်ရွာမှ Yuuki ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိနေသည့်အပြင် တခြား ကောင်မလေးတွေလဲအများကြီးပါတဲ့ Harem ဇာတ်လမ်းကောင်းကို ...
Monogatari Bakemonogatari Review ဒီanimeကတော့ တော်တော်လည်းနာမည်ကြီးသလို ဇာတ်လမ်းကလည်းသူများတွေနဲ့မတူတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ Araragi Koyomiဆိုတဲ့ တတိယနှစ် အထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ပေါ့။ သူကသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ကနေ မကြာသေးခင်ကမှ လူနီးပါးအဖြစ်နေထိုင်လာနိုင်တဲ့သူပါ။ တစ်နေ့မှာ ဘယ်သူနဲ့မှလည်းစကားမပြောဖူး လူလည်းသိပ်မသိတဲ့အတန်းဖော် Senjougahara Hitagi ဆိုတဲ့မိန်းကလေးက ရုတ်တရက်ဆိုသလို လှေကားပေါ်ကပြုတ်ကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့်Koyomiကအမိအရဖမ်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့မှာKoyomiဟာ Hitagiကိုသတိထားမိသွားပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အလေးချိန်မရှိသလောက်ကို ပေါ့နေလို့ပါပဲ။ သူ့ဆီမှာပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေတာသိလို့ Koyomiကသူ့ကိုလိုက်လိုက်လျောလျောကူညီလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကူညီလဲဆိုတော့ Koyomiကိုသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်အဖြစ်ကနေ လူတစ်ယောက်လိုနေနိုင်ဖို့အထိ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ Oshino Memeဆိုတဲ့ အသက်လတ်ပိုင်း အိမ်ခြေမဲ့သူဆီကို Hitagiကိုခေါ်သွားပေးခဲ့တာပါ။ Hitagiကဘာပြဿနာတွေရှိနေလို့Koyomiကကူညီရတာလဲ။ Koyomiကကော တကယ့်လူသားစစ်စစ်လိုဖြစ်နေပြီလားဆိုတာကတော့... စောင့်မျှော်အားပေးလိုက်ကြပါဦးခင်ဗျာ Bakemonogatari Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8
Shirobako ကျွန်တော်တို့ ကြည့်နေကြတဲ့ တစ်ပိုင်းဆိုတာ လွယ်လွယ်နဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး နောက်ကွယ်မှာ ကြိုးစားရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ် Producer တွေ အသံသရုပ်ဆောင်‌တွေ Key Animator တွေ Director တွေ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာတွေ ဇာတ်လမ်းကိုကြီးကြပ်ရတဲ့လူတွေ Studio တွေ စသည်ဖြင့် အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းပြီး anime တစ်ပိုင်းကို နှစ်ပတ်လောက်အချိန်ယူဖန်တီးရတာပါ ဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုဖြစ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်မလေး ၅ ယောက်ရှိပါတယ် သူတို့ဟာ anime ဖန်တီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ယောက်တစ်ခုစီဖြစ်ချင်ကြပါတယ် သူတို့ဟာငယ်ငယ်လေးကတည်းက animation တစ်ခုကို အတူတူဖန်တီးကြမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိပါတယ် သူတို့တွေကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေဟာ တိုကျိုကို ကွဲကွဲပြားပြားစီရောက်သွားကြပြီး ဘယ်လိုပြန်ဆုံတွေ့ကြမလဲ သူတို့ပြန်ဆုံ‌တွေ့ကြတဲ့အခါမှာ သူတို့အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာမှာလား... Episode1 Racaty/Mediafire Episode2Mediafire
Magatsu Wahrheit: Zuerst Magatsu Wahrheit :Zurest Genre: Action, Fantasy, Magic Released: 2020 Status: Ongoing Other name: MAGATSU WAHRHEIT, MWZ, 禍つヴァールハイト -ZUERST- Warheit နိုင်ငံတော်အောက်မှာ နေထိုင်တဲ့ လူငယ် နှစ်ယောက်ဟာ မြို့တော်ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စီစဉ်နေကြတယ် ။Inumel ဆိုတဲ့ရှက်တတ်တဲ့ကောင်လေးဟာ သူ့ညီမလေးကို သူ့မိဘအိမ်မှာထားပြီး ဝန်တင်ကားကြီး မောင်းနှင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်တယ် ပြီးတော့Leocadio ဆိုတဲ့သူကတော့ အင်ပါယာမြို့တော်မှာ နေ့နေ့ညည စစ်သားဖြစ်ချင်ဖို့ တွေးနေတဲ့သူက ရိုးအတဲ့စစ်သားဖြစ်လာခဲ့တယ် အင်ပါယာကတော့ ကမ္ဘာကို ပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ လူတွေကွယ်ပျောက်ကုန်တယ် ထိုပေါက်ကွဲမှုပြီးတဲ့နောက် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ရောဂါဆိုးတွေ ဝင်ရောက်လာတယ် ကျန်ရှိနေတဲ့လူသားတွေလည်း စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ ဖြစ်နေကြပြိ ထိုအချိန်မှာပဲ Inumael Leocadio နဲ့ အင်ပါယာ မှာ ပြင်းထန်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ် လက်နက်တစ်ခုကို မှောင်ခိုယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ Ongoing မို့လို့ တပတ် တပိုင်း တင်ပေးပါ့မယ် Magatsu Wahrheit :Zurest Genre: Action, Fantasy, Magic Released: ...
Teasing Master Takagi-san Season 1 အချစ်ဆိုတဲ့ အရာဟာဆန်းကျယ်လှပါတယ် Takagi ဆိုတဲ့ဘက်စုံတော်တဲ့ကောင်မ‌ေလး‌ ဟာ Nishikata ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကြိုက်နေပါတယ် ထိုကောင်လေးဟာ သူ့ကို စလိုက်ရင် အလွန်ရှက်သွားတာကြောင့် Takagi ဟာသူ့ကို တွေ့ရင် မစရမနေနိုင်ပါဘူး Nishikataကလည်း သူအစခံရပေါင်းများလာတော့ သူမကို ပြန်စမယ်ဆိုပြိး ကြံတိုင်း အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထားတဲ့ romance animeလေးဖြစ်ပါတယ် Season 1 Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 Episode 12 OVA
TMDb: 8.2/10 155 votes
Teasing Master Takagi-san Season 1
Charlotte Charlotte Info Anime Title: Charlotte Japanese: Charlotte（シャーロット） Genres: Drama, School, Super Power Type: TV Status: Finished Airing Episode: 13 Aired: Jul 5, 2015 to Sep 27, 2015 Season: Summer 2015 Studio: P.A. Works Duration: 24 min per ep Score: 7.82 Synopsis : While on the surface Yuu Otosaka appears to be just another charming and intelligent teenager, he hasasecret—he has the ...
TMDb: 8.1/10 117 votes
Hi Score Girl "ရဂုချီ ဟာရူအို"ဆိုတဲ့ ၆တန်းနှစ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ ကျောင်းစာပညာရပ်ပိုင်းမှာ အရမ်းကို ညံ့တဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သာမန်ကျောင်းသားတွေထဲက မထင်မရှားတစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ဆီမှာ ထူးချွန်တဲ့အပိုင်းလေးတော့ ရှိတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ဂိမ်းကစားတဲ့ စွမ်းရည်ပါပဲ။ တစ်နေ့ သူဂိမ်းကစားရင်း ပွဲဆက်တိုက်နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ မိန်းကလေးကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့ အနိုင်ပိုင်းခြင်းကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာ တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူနဲ့တစ်ကျောင်းတည်း တစ်တန်းတည်းအတူတူတက်နေတဲ့ နန်းထိုက်တော်ဝင်ပန်းလို့ ညွှန်းဆိုခံရတဲ့သူ၊ မိသားစုက ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့အပြင် စာပေ၊ အနုပညာ၊ ရုပ်ရည်ရူပကာ ဘာဆိုဘာမှ အပြစ်ပြောစရာ ရှာမတွေ့နိုင်လောက်တဲ့ "အိုနို အာကီရ"ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးပါပဲ။ သူ့ရဲ့တစ်ခုတည်းသော ကျွမ်းကျင်ရာ ဂိမ်းနယ်ပယ်မှာ သက်တူရွယ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ အနိုင်ကစားတာကို ခံလိုက်ရတဲ့နောက် "ရဂုချီ ဟာရူအို"တစ်ယောက် မခံချင်စိတ်တွေဖြစ်လာပြီး "အိုနို အာကီရ"ကို အနိုင်ကစားနိုင်အောင် ကြိုးစားပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ "ရဂုချီ ဟာရူအို"တစ်ယောက် ဘက်စုံထူးချွန်တဲ့ "အိုနို အာကီရ"ကို အနိုင်ပြန်ယူနိုင်ပါ့မလား။ ...
TMDb: 8.1/10 69 votes
I’m Standing onaMillion Lives သူငယ်ချင်းလည်းမရှိ ဘယ်ကလပ်မှ မဝင်ထားတဲ့ တကိုယ်တည်းသမားကိုးတန်းကျောင်းသား Yotsuya သည် တစ်နေ့ ဂိမ်းကဲ့သို့ကမ္ဘာ(အခြားကမ္ဘာ)ကို သူ့အတန်းဖော်ကောင်မလေးနှစ်ယောက်နှင့်အပို့ခံလိုက်ရပါတယ်... ဂိမ်းထဲက quest မအောင်မြင်ရင် ဂိမ်းထဲက အကောင်တွေက တကယ့်ကမ္ဘာကို ရောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သူမုန်းတဲ့အရာတွေကို ကာကွယ်ပေးပြန်ရပါတော့တယ်... Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode 9
Love Stage!! Love Stage Episode-1 Download link(MEGA) DownloadLink(MediaFire) Episodes-2 DownloadLink(MEGA) Download (MediaFire) Episode5DownloadLink(MEGA) Download (MediaFire) Episode6DownloadLink (Mediafire) Episode7DownloadLink (Mediafire) DownloadLink(Mega)